यी हुन् परीक्षामा पास गराइदिने लालच दिएर यौ’नसम्बन्ध राख्न लगाउने शिक्षिका ! - Kavre Online
काठमाडौं । के हुन्छ जब शिक्षक वा शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई परीक्षामा पास हुनको लागि आफुसाग यौ नसम्बन्ध राख्न अनुरोध गर्छन ? यस्तै, सनसनीपुर्ण काण्ड बजारमा आएको छ । यस घटनामा संलग्न महिला कलेजकी प्राध्यापकलाई मद्रास उच्च अदालतले पक्राउ गरेको ११ महिना पछि उनीलाई सशर्त जमानत दिएको छ । न्यायाधीश एन किरुबाकरण र मदुरै पीठका एसएस सुन्दरले निलम्बित सहायक प्राध्यापक निर्मला देवीलाई जमानत दिएका हुन् ।
प्रोफेसरमाथि आरोप छ कि उनले मदुरै कामराज विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेर महिला विद्यार्थीहरूलाई राम्रो अंक ल्याएर पास गराइदिने लालच दिने गर्थिन । सरकारी वकिलले अदालतमा भने कि उनलाई जमानत दिदाँ कुनै आपत्ति छैन ।
अदालतले प्राध्यापकलाई अनुसन्धानमा पुलिसलाई पूर्ण सहयोग गर्न निर्देशन दियो र मिडियामा कुनै पनि प्रकारको अन्तर्वार्ता नदिन भनिएको छ । यसले अनुसन्धानलाई असर पार्ने अदालतको बुझाई रहेको छ । यसभन्दा पहिले तल्लो अदालत र उच्च अदालतले जमानत अपिल खारेज गरेको थियो । निजी कलेज देवानगा कला कलेजकी प्राध्यापक देवी गत वर्ष पक्राउ गरिएको थियो ।
विद्यार्थीसँग प्राध्यापकको कुराकानीको अडियो भाइरल भए पछि कलेज र महिला फोरमको गुनासोमा उनका विरुद्ध कारबाही गरियो । अडियो क्लिपमा, प्रोफेसरले कथित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई केही अधिकारीहरूसँग यौ नसम्बन्ध राख्न सल्लाह दिइरहेका सुन्न सकिन्छ ।
पक्राउ गर्नु भन्दा पहिले कलेजले आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि प्राध्यापकलाई निलम्बन गरेको थियो । अडियो फेला परेपछि जब विवाद बढ्यो तब यो विवाद राज्यको सीआईडीलाई हस्तान्तरण गरियो ।
देवीको सोधपुछको आधारमा प्रहरीले सहायक प्राध्यापक भि मुरुगन र अनुसन्धानका विद्यार्थी करुप्पसमीलाई पनि यस मुद्धामा संलग्न भएको आरोपमा गिरफ्तार गरेको छ । उच्च अदालतले निवेदन अस्वीकार गरेपछि दुबैलाई सर्वोच्च अदालतले जमानत दिएको हो । गत वर्ष सीबी–सीआईडीले २०० पृष्ठको आरोपपत्र अदालतमा दायर गर्यो । यसभन्दा पहिले, १६०० पृष्ठको प्रि–चार्जशीट जुलाई महिनामा फाइल गरिएको थियो । एनडीटिभी
Prevभरतपुरबासिको मन जित्न रातदिन नभनी यसरी ख’टिन्छ्न रेणु दाहाल
Nextतीन करोड नेपालीलाइ चकित पार्ने अलौकिक माता भेटियो (भिडियो हेर्नुहोस )
यी महिलाले बच्चालाइ जन्म दिएपछि, पेटबाट निस्केको अर्को चिजले डाक्टर अचम्म परे !
राजीनामा दिए सँगै बास्कोटाले आँखा भरि आशुँ पार्दै गरे यस्तो ट्वीट
मुना कार्कीको ह’त्या महिला कामदार, ड्राइभर र… (2,930)
सानेपा प्रक रणमा कसैले नसोचेको बा स्त बिकता… (2,007)
सानेपा का’ण्डः मुनामाथि जाइलाग्दा कुकुर आ,क्रा’मक,… (1,481)
बिवाहपछि किन महिलाको हिप बढ्छ ? यस्तो रोचक छ कारण ! (1,351)
कोरोना भाइरस : बालबालिका किन बिरामी भएनन् ? यस्तो छ… (1,346)
विजयले किन गरे मुनाको ह’त्या ? आयो मोबाइलको फरेन्सिक… (1,230)